मृत्युको मुखमा पुगेकी सुर्पनाले यसरी पाइन् पुनर्जन्म
जुम्ला, असार २२
सुर्पना हमाल अहिले अस्पतालको शैय्यामाथि जीवनको लामो सास लिइरहेकी छन् । सातौँ गर्भ बोकेकी हमालले अन्तिम बच्चा पाइन् तर पाठेघर फुटेर दुई टुक्रा भई अत्यधिक रक्तस्राव हुँदा झण्डै मृत्युको मुखमा पुगिन् ।
चिकित्सकले सुत्केरी हुने भनेर दिएको समयभन्दा दुई हप्तापछि आइन् उनी । मङ्गलवार बिहान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लामा पुगेकी उनलाई बेलुका ६ बजे व्यथा लागेको र ८ः३० बजे बच्चा जन्मेको डा. अर्यालले बताए । ‘उनको बच्चा जन्म्यो तर थाम्नै नसकिने गरी पाठेघरबाट रगत अत्यधिक मात्रामा बग्न थाल्यो । यो दृश्यले हामीलाई निकै बिचलित बनायो,’ डा. अर्यालले भने ।
उनले अगाडि भने, ‘पाठेघरदेखि भित्रसम्म फुटेको रहेछ, रगत थाम्नलाई हामी प्रतिष्ठानका चिकित्सक, विद्यार्थी सबै लाग्यौँ र पाठेघर पनि काटेर फाल्यौँ ।’त्यो अवस्था देख्दा आफूहरुले उनी बाँच्छिन् भन्ने आशा पाँच प्रतिशत मात्र राखेको उनको भनाइ थियो ।
डा. अर्यालका अनुसार सुर्पनाको शरीर रगत सकिएर सेतो भइसकेको थियो । डा. अर्यालसँगै उपचारमा संलग्न प्रतिष्ठानका चिकित्सकद्वय रमेश भट्टराई र राजीव शाहले शुरूमा रगत दिएसँगै त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीले पनि उनलाई रगत दिए । एकातिर रगत अर्कोतिर अक्सिजन दिँदै गर्दा राति २ बजिसकेको र त्यतिबेलासम्म उनी होसमा नआएको डा. अर्यालले बताए । तथापि आधा घण्टाभित्र नै सुर्पनालाई नौ पिण्ट रगत चढाइएको उनको भनाइ थियो ।
सशस्त्र प्रहरी बल जुम्लाका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रेमबहादुर भण्डारीको टोली पनि रातको बीचमा रक्तदान गर्न त्यहाँ पुग्यो । चिकित्सक, नर्स, विद्यार्थी सहितको प्रतिष्ठान परिवार, सेना, प्रहरीको समुल प्रयासबाट दिइएको १४ पिण्ट रगतबाट उनले पुनर्जन्म पाएको प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार विश्वराज काफ्लेले जानकारी दिए ।
पाठेघर दुई टुक्रा भएर जीवन मरणको अन्तिम अवस्थामा पुगेकी एउटी आमाको जीवन बचाएर बाल भविष्य सुरक्षित गर्ने चिकित्सक, नर्स, विद्यार्थी, सेना र प्रहरी सबैको प्रयासप्रति गर्व गर्दै रजिस्ट्रार काफ्लेले हार्दिक धन्यवाद पनि ज्ञापन गरेका छन् । चिकित्सक अर्यालले उनको अवस्था अहिले सामान्य रहेको बताएका छन् ।
उनका श्रीमान् जयबहादुर हमालले प्रतिष्ठानमा नपुर्‍याएको भए श्रीमती र छोरा दुवैको ज्यान अकालमा जाने बताए । प्रतिष्ठानले यति ठूलो काम गर्छ भन्ने नबुझेका उनले मृत्युको मुखमा पुगेकी श्रीमतीलाई जीवन दिने सबैलाई भगवान्को सङ्ज्ञा दिए ।
प्रतिष्ठानका प्रशासकीय अधिकृत द्वन्द्व शाहीले कर्णालीका दर्जनौँ नागरिकको जीवनदाता बनेर नेपाली सेनाले ठूलो गुण लगाएको बताए । उनका अनुसार प्रतिष्ठानका अधिकतम जटिल घटनाको सारथी नेपाली सेना बन्दै आएको छ । रासस
प्रकाशित मिति: बिहिबार, असार २२, २०७४, ११:५४:३९